तपाइको आजको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुस राशिफल भदौ २० गते, बुधबार
September 5, 2018 Spnews Comments Off on तपाइको आजको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुस राशिफल भदौ २० गते, बुधबार
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) : गलत लेखाई अथवा गलत बुझाइले आफ्नो साख गिर्न सक्छ ध्यान दिनुहोला । छोटो तथा रमाइलो यात्राको तय गर्न सकिने भए पनि बढिनै उत्साहित हुन खोन्दा नराम्रो घट्न घट्न सक्छ ध्यान दिनुहोला । व्यापार व्यवसायमा […]
डोलेश्वर महादेवले सबैको रक्षा गरुन: हेर्नुस आजको राशिफल : भदौ १३ गते, बुधबार
August 29, 2018 Spnews Comments Off on डोलेश्वर महादेवले सबैको रक्षा गरुन: हेर्नुस आजको राशिफल : भदौ १३ गते, बुधबार
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) : कर्म प्राप्तिको निम्ति लामो दुरीको यात्रा हुनेछ । अवसरको खोजीमा दौडधुप गर्नुपर्ने समय रहे पनि नतिजा भने न्यून हात पर्नेछ । आक्षेप लगाउनेहरू सक्रिय हुनेछन् भने सहयोग गर्नेहरू कमै भेटिनेछन् । फाइदाका पछि लाग्दा […]
तपाइँको आजको दिन कस्तो हुनेछ ? हेर्नुस राशिफल साउन ३० गते, बुधबार
August 15, 2018 Spnews Comments Off on तपाइँको आजको दिन कस्तो हुनेछ ? हेर्नुस राशिफल साउन ३० गते, बुधबार
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) : पारिवारिक यात्राका क्रममा स्वादिष्ट भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । परिस्थितिलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिने हुनाले समयमा कामहरू बन्नेछन् । माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ भने पति पत्नीबिच मायाको डोरो अझ कसिलो भएर […]
राशी अनुसार तपाईको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुस राशिफल साउन २३ गते, बुधबार
August 8, 2018 Spnews Comments Off on राशी अनुसार तपाईको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुस राशिफल साउन २३ गते, बुधबार
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) : समयमा होस नपुग्नाले खर्च मात्र हुनेछ। प्रलोभन देखाउनेहरूले फसाउन सक्छन्। मेहनत गर्दागर्दै पनि उपलब्धि प्राप्त गर्न मुस्किलै पर्ने समय छ। शुभचिन्तकहरूको सुझावलाई बेवास्ता गर्नाले पनि दुःख पाइनेछ। आफ्नै कमजोरीले काममा बाधा हुने सम्भावना देखिन्छ। […]
तपाईको आजको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुस राशिफल साउन १६ गते, बुधबार
August 1, 2018 Spnews Comments Off on तपाईको आजको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुस राशिफल साउन १६ गते, बुधबार
तपाईको आजको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुस राशिफल असार २७ गते, बुधबार
July 11, 2018 Spnews Comments Off on तपाईको आजको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुस राशिफल असार २७ गते, बुधबार
मेष(चू,चे,चो,ला,लिई,लू,ले,लो,अ) : प्रणय सम्बन्धमा चिसोपनको विकास हुन सक्छ ध्यान दिनुहोला । कुटुम्ब तथा आफन्तसँग कुनै पनि काम गर्दा ध्यान दिनुहोला पछि आर्थिक कुरामा राय बाझिने तथा मनमुटाव सिर्जना हुन सक्छ । मध्यान्हबाट समय राम्रो रहेकोले दाजुभाइ […]
तपाईको आजको भाग्य हेर्नुस राशिफल : असार १३ गते, बुधबार
June 27, 2018 Spnews Comments Off on तपाईको आजको भाग्य हेर्नुस राशिफल : असार १३ गते, बुधबार
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) : धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रमा विशेष चासो बढ्नेछ । पढाई लेखाई तथा खोजीमुलक क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ भने गुरुवर्ग तथा आफन्तको सहयोगले थप हौसला प्राप्त हुनेछ । बुवा वा बुवा सरहका मानिसबाट विशेष सामान तथा उपहार […]
तपाईको आजको भाग्य: हेर्नुस राशिफल : असार ६ गते, बुधबार
June 20, 2018 Spnews Comments Off on तपाईको आजको भाग्य: हेर्नुस राशिफल : असार ६ गते, बुधबार
मेष(चू,चे,चो,ला,लिई,लू,ले,लो,अ) : व्यावसायमा प्रशस्त आम्दानी हुँने तथा पुराना कारोबारहरूलाई सल्टाउँने समय रहेको छ । शत्रुले दुख दिन खोजे पनि अन्ततः उनीहरूलाई परास्त गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ । आफन्त तथा मावलि पक्षबाट सहयोगको अपेक्षा गर्न सकिनेछ । […]
तपाइको आजको दिन कस्तो हुनेछ हेर्नुस राशिफल जेठ ३० गते, बुधबार
June 13, 2018 Spnews Comments Off on तपाइको आजको दिन कस्तो हुनेछ हेर्नुस राशिफल जेठ ३० गते, बुधबार
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) : माया प्रेममा धोका हुँन हुँनेछ भने परिवारमा झैँ झगडा हुँने सम्भावना अधिक रहेको छ । सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान्य समस्याले सताउँनेछ । पढाई लेखाइमा अरू भन्दा पछि परिने हुँदा मन खिन्न हुँनेछ । कामको […]
तपाइको आजको दिन कस्तो हुनेछ हेर्नुस राशिफल, जेठ २३ गते, बुधबार
June 6, 2018 Spnews Comments Off on तपाइको आजको दिन कस्तो हुनेछ हेर्नुस राशिफल, जेठ २३ गते, बुधबार
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जाने तथा धन आगमनका बिभिन्न बाटाहरु फेला पार्न सकिनेछ । आफन्त तथा मित्रहरुको सहयोग पाईने हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ । राम्रो काम गरि समाजमा नाम कमाउन सकिनेछ । सवारि साधन […]